Diyaarad ku Dhacday Garbahaarey iyo Waraysi Bile Huufood Ibraahim: “Diyaaraddu waxay u Rarnayd WFP” – Radio Daljir
Juunyo 3, 2017 7:15 g 0
Diyaarad sidday gargaar loogu talagalay dadka danyarta ee ku nool Gobolka Gedo ayaa Maanta ku Burburtay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Garbahaareey. Diyaaraddaan oo shixnadda saaran urarneyd Hay’adda Cunnada Aduunka ee WFP ayaa la sheegay in ay ku Timid Cilad taasi oo sababtay in Dab uu ka kaco Diyaaradda. Inkastoo Shaqaalaha Saarnaa Diyaaradda oo ahaa Ajnaabi ay ka badbaadeen Shilka ayaa waxaa hadana wararka waxay sheegayaan in Shaqaalaha isla maanta laga daad gureeyay Goobta uu shilka ka dhacay.
Masuuliyiinta Maamulka gobolka Gedo ee Jubbaland iyo Ciidamo katirsan AMISOM ayaa gaaray Goobta iyadoona lagu guuleestay in la dimiyo dabka ka kacay Diyaaradda isla markaana Raashinkii saarnaa laga dejiyay.
Si aanu Faahfaahino ku saabsan Shilkaasi waxaa Radio Daljir u suuragashay in ay waraysi la yeelato Madaxa Amniga Gobolka Gedo ee Jubbaland Bile Huufood Ibraahim.
Waxa uu uwaramay Cumar Lakiman oo ku sugan istudiyaha Daljir ee Magaalada Caabudwaaq.